Ukuqapha Komkhankaso: Insizakalo Ye-imeyili Enamandla Ye-Ejensi noma Ibhizinisi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 16, 2015 NgeSonto, ngoMashi 15, 2015 Douglas Karr
Omunye umhlinzeki wesevisi we-imeyili esingabelananga kakhulu ngaye Umkhankaso Wokumkhankaso. Bebelokhu behlonishwa embonini ngokubika kwabo okuvelele, kepha sebephenduke baba ngumhlinzeki wesevisi we-imeyili oqinile webhizinisi noma ama-ejensi.
Ezinye zezici ezihlukile ze-Campaign Monitor
zokuphawula - I-Campaign Monitor ayifaki amandla ngamalogo kuma-imeyili ayo aphumayo futhi i-interface yomsebenzisi ingagunyazwa ku-ejensi yakho noma ebhizinisini.
Ukubika kwe-iPhone - Umkhankaso Wokuqapha usungule uhlelo lokuqapha nokubika langempela lwe-iPhone.
Hambayo - Izifanekiso ezenziwe ngokwezifiso zenzelwe ukubhekela amaklayenti wedeskithophu namadivayisi eselula. Ungahlola futhi izithombe-skrini zedeskithophu noma izinhlobo zeselula ngaphakathi kwesikhulumi kumakhasimende angaphezu kwama-20.
Facebook Bhalisa - Uhlelo lokusebenza lwe-Facebook Bhalisa lwenza kube lula ukulahla ifomu lokubhalisa ngqo ekhasini lakho le-Facebook.
Social Media - Ukwabelana Komphakathi nokubika kunikeziwe.
Okuqukethwe okunamandla - Yenza ngokwezifiso umbhalo, izithombe noma ezinye izinto ngokususelwa kumanani wenkundla.
Ukuhlolwa kwe-A / B Split - Hlola ukwehluka okubili kwemikhankaso yakho ye-imeyili, bese uthumela umenzi ohamba phambili.
Ukuhlolwa Kogaxekile - Qalisa umkhankaso wakho ngokusebenzisa izihlungi zogaxekile ezidumile kwideskithophu, iseva kanye ne-firewall level ngaphambi kokukuthumela. I-DomainKeys, i-Sender ID, kanye nama-loops empendulo ngokulethwa okungeziwe.
-Google Analytics - Landelela ukuthengisa nokuguqulwa okuhlobene nomkhankaso wakho ku-Google Analytics.
Abantu baseMkhankaso Wokuqapha babeke ngisho nezabo umakhi wesifanekiso se-imeyili phandle lapho kunoma ngubani ongayisebenzisa! Baphinde bagcina eyomkhakha umhlahlandlela omuhle wokuxhaswa kweCSS kuzicelo zamakhasimende we-imeyili.
Isihleli esihle se-imeyili, ukuhlukaniswa kwesigaba, i-API, kanye nenjini yokulinganisa ngokwezifiso nakho kuyingxenye ye- Umkhankaso Wokumkhankaso ipulatifomu. Qiniseka ukubangeza ohlwini lwakho lwama-ESP ukuze ubuyekeze!
Tags: umhlinzeki wesevisi ye-imeyiliUmkhankaso Wokumkhankasocss ukwesekwa nge-imeyiliiklayenti le-imeyili cssumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliumakhi wesifanekiso se-imeyiliizifanekiso ze-imeyliespi-imeyili ephathekayowhitelabel esp
Izibalo ezi-3 Ezimangazayo Ezixhasa Ukuthengisa Komphakathi